Meyra Wiricheya - Meyra Chairs | Karman Healthcare
Ruzivo rwunopihwa kubva kune yavo webhusaiti:
Sevatsigiri veMedort Boka rakasimba mune zvemari uye rakabudirira, MEYRA ndeimwe yevanonyanya kuzivikanwa uye vanobudirira kwazvo vagadziri ve mavhiripu uye vatengesi vezviyamuro zvekuvandudza. Mutsara unoti "Tinofambisa vanhu" unopfuura zvinopfuura a murandu, ifilosofi yedu uye inosarudza maitiro atinoita bhizinesi. Isu tinotsigira uye tinokurudzira remara vanhu uye kuvatendera kuti vafambe uye vakazvimiririra.
Zvigadzirwa zvedu shamwari dzinokosha kune vanhu vakaremara kana vanhu vane hurema kufamba uye ivo vanobatsira nematambudziko mazhinji uye madiki akasangana nehupenyu hwezuva nezuva.
Kutenda kune yedu yakazara yakazara ye mavhiripu, zvinobatsira kudzorera uye mhinduro muzvikamu zvakasiyana zveumwe neumwe, tinounza zvinangwa zvega zvega zvichibvira uye nekuita hupenyu hwezuva nezuva huve hwakajairika,
ingave mukutarisirwa mudzimba, kunze uye nezve, mukati inorapa kana in mutambo wemakwikwi.
Isu tinounza pamwe hunyanzvi uye ruzivo rweumwe neumwe musimboti kugona kuti tiwane maonero matsva uye nekudaro tinogadzira mhinduro dzekuvandudza. Kugara uchitaurirana na remara vanhu, vanachiremba, makiriniki, varapi uye vachengeti uye kubatana kwepedyo nemakambani ekurapa anokwanisa anofambisa kugadzirwa kwezvinhu zvinogoneka. Isu tinobatsira nekubatsira nekutenda kune kwedu chigadzirwa kudzidziswa kwehunyanzvi vatengesi uye akasiyana akasiyana evashandi vebasa.
Muchidimbu: MEYRA yakamirira hunyanzvi hwakabatanidzwa, kuzvipira kukuru uye chiratidzo chakasimba kweanopfuura makore makumi manomwe neshanu - kune chinangwa chedu chakafanana.